Spotify music online na Spotify desktọọpụ
Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ bụ biakwa obibia iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ n'agbanyeghị ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu a na-eji ma ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na n'elu ikpo okwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị nye site na na ụlọ ọrụ choro iji jide n'aka na ha na-belatara na afọ ojuju. Spotify nwekwara mere otu na ọ bụ-ahụ kwuru na desktọọpụ ahịa nke ọrụ mere ka n'aka na a nnukwu ahịa isi weghaara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Part 1.download Spotify desktọọpụ ahịa / Spotify desktọọpụ ngwa
Part 2.Complete usoro banyere Spotify desktọọpụ ọkpụkpọ
1. Olee otú ibudata Spotify desktọọpụ ahịa / Spotify desktọọpụ ngwa
Iji jide n'aka na Spotify desktọọpụ ahịa ebudatara na arụnyere na ọ bụ-ahụ kwuru na ọrụ adịghị ga-aga site a usoro nke ogologo na siri ike iji mee ka n'aka na needful na-eme. Ọ bụ n'ezie nnọọ mfe ime n'aka na ahịa na-abụghị nanị ebudatara ma wụnye ma atụmatụ na-enyoba enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe Filiks na-agaghị na-atụle n'isiokwu na-a nkuzi ma onye ọrụ ga-enweta ndị kasị mma na ala nke results na nke a na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na usoro na e agbakwunyere ebe a bụ onye na-na-Bilie screenshots na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị na-eso nzọụkwụ na-kwuru ebe a iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta na-enweta enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Usoro ga-emekwa ka n'aka na maka ihe ọ bụla onye ọrụ ma ọ bụrụ na e nwere abụọ oge a nkuzi bụ iji izute achọ na mkpa nke onye ọrụ nke mere na ha nwere ike ime needful na ihe ọ bụla usoro na-enweghị nke:
Uru nke echiche
Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe okirikiri nhọrọ ukwuu nke desktọọpụ ngwa nke na-eme n'aka na onye ọrụ bụghị nanị ọkọkpọhi kasị mma n'ihi kama ọ na-akawanye ọkaibe ọrụ na nke a. Desktọọpụ ahịa bụ mfe iji na igbo music metụtara mkpa nke ndị ọrụ ole na ole clicks. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nchọgharị results na songs na e agbakwunyere n'ime bụ ndị na-bụ ndị kasị mma. Dum Spotify ama egwuregwu bụ ya mere megheworo ndị music Player mere na ha pụrụ dribble ha mmasị-awụ ọsọ n'ugwu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Onye ọrụ na-mkpa ijide n'aka na na ọkachamara ndụmọdụ bụ na-achọ ọbụna ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụ tech savvy dị ka ọ ga-ekwe ka ha na-kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Olee otú ige ntị Spotify music online
Nke akụkụ a nke nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita desktọọpụ ahịa download na nwụnye. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma Filiks dị ka ọ na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi zuru ezu nnyocha banyere atụmatụ nke ngwa dị ka mma. The usoro e agbakwunyere na screenshots iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ụlọ ọrụ na mkpokọta onu bụ ihe na-aghọ ọkaibe n'ihi na onye ọrụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-soro na-enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ ya mere na ihe kasị mma pụta na-enweta enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
1.The Spotify website bụ ka a bịa na iji jide n'aka na usoro a malitere na ọ bụ a onwe-akpali usoro ga-eme ka n'aka na ihe kasị mma pụta e nyere ka onye ọrụ:
2.The usoro na ọnọdụ na-kwuru na website na-na-agụ ma ghọta tupu ha na-nabatara:
3.The n'ụlọ peeji a na-ahụ na-enyoba iji jide n'aka na saịtị enyi na-enweta.
4.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara :.
5.The Bido button bụ na-enwe iji jide n'aka na ngwa na-ulo oru mgbe echichi:
6.The ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na songs na-achọgharị na iji search mmanya na bụ na HT n'akụkụ aka ekpe nke ngwa:
7.The onye ọrụ nwere ike na-kere listi ọkpụkpọ dị ka kwa ọchịchọ:
8.The audio preview ngwá ọrụ bụ ihe na a pụrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita song ebre. The songs previewed n'ebe na-na-nri pịrị iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye menu si ebe play nhọrọ bụ ga-ahọrọ iji wuchaa usoro na zuru:
Ebe m ga-Bollywood Songs Torrent
> Resource> Music> Gee Spotify Music Online na Spotify Desktọpụ